Shariif-ka Oo Ku Hungoobay Safarkiisii Ethiopia | Xarshinonline News
Shariif-ka Oo Ku Hungoobay Safarkiisii Ethiopia
Addis Ababa, (NNN) Wasiirka Arrimaha Debadda ee Federalka Itoobiya, Seyoum Mesfin ayaa xafiiskiisa ku qaabilay Madaxweynaha dowladda Taagtaran ee lagu soo dhisay Jabouti, Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Seyoum ayaa Sheekh Shariif ka dhageystay warbixin dheer oo ku saabsan waxyaabihii u qabsoomay dowladda Shariifka iyo waliba duullaanka ay qorshayneyso dowladdiisu in ay dhawaan ku qaado qaybo katirsan caasimadda Soomaaliya, halkaas oo ay ka taliso qiyaas dhan 2 kilometer.
Sheekha ayaa aad uga cawday dowladda Kenya oo dhawaan ku gacansaydhay codsi uu u jeediyey, kaas oo uu ku weydiistay sidii ay dowladda Kenya ugu gacan galin lahayd ciidan u dhashay gobollada Jubooyinka oo ay dowladda Kenya tababartay. Sheekh Shariif ayaa ka codsanday Seyoum in ay dowladda Itoobiya arrintan soo faragaliso.
Dalka Kenya ayaa dhawaan lagu tababaray ciidan xooggan, kaas oo kal hore laga soo uruuriyey labada gobol ee Jubooyinka. Siyaasiyiinta gobollada Jubooyinka oo uu horkacayo wasiirka Gaadiidka Cirka iyo Dhulka ee Soomaaliya, Prof. Maxamed Cabdi Gaandi ayaa aad uga horyimi qorshaha Sheekh Shariif ee ah in ciidankan la geeyo xarunta madaxtooyada si ay u illaaliyaan guriga Sheekh Shariif.
Siyaasiyiinta Jubooyinka ayaa qorshaynaya in ay ciidankan ka howl galo sidii ay Jubooyinka uga sifayn lahaayeen kooxaha ku dhuunta diinta, Siiba Aragagixisada Al-shabaab isla markaana halkaas ay uga dhisi lahaayeen maamul u adeega shacabka Jubooyinka, kuwaas oo aan helin nimaad dowli ah tan iyo markii ay burburtay dowladii uu hogaaminaayey Kaligii taliyihii Siyaad Bare.
Dowladda Itoobiya ayaa qabta in aanay jirin waxbadan oo Muqdisho laga qaban karo, maadaama dadkii degaaanka u ahaa aanay doonayn dowlad iyo nimaad kala danbayn leh oo ka hirgala koonfurta Somalia.
Sheikh Shariif oo aan wax badan oo uu ku farxo ka helin dhanka dowladda Itoobiya ayaa waxaa galabta sii sagootiyey masuuliyiin uu horkaceyey wasiirka Dhaqanka iyo Dalxiiska ee dowladda dhexe ee Itoobiya, mudane Maxamud Dirir. Shariifka ayaa ka duulay Garoonka Bole International Airport.
← U HIILI DIINTAADA ISLAAMKA!
KULMIYE oo dhoolatuskii ugu weynaa ku soo dhaweeyey taageerayaal Galbeedka Burco ah →